> Resource> Atụmatụ> Olee Email Pictures dị ka a ngosi mmịfe
Ọ bụrụ na mmadụ na-ajụ m otú Email foto enyi, e nwere ọtụtụ ụzọ. The mfe ụzọ bụ mpikota onu foto, nke nwere ike belata foto faịlụ nha nakwa dị ka eme ka o kwe Email foto na otu mgbakwunye.
Email foto dị ka a ngosi mmịfe? E nwekwara ụzọ dị iche iche na-aghọta echiche a. Ị pụrụ ịhụ na a website ka na-echekwa gị foto ngosi mmịfe. Dị nnọọ Email a ngosi mmịfe njikọ ndị ọzọ mere na ha nwere ike ịga na-ekiri na ihe ngosi mmịfe onwe ha. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na-achọ ime ihe ize ndụ bulite foto gị online, i nwere ike iji ọkacha mmasị gị ngosi mmịfe Ndinam software ike a ngosi mmịfe nkiri na-ezite ha ka mgbakwunye. Họrọ ị ụzọ Email foto dị ka a ngosi mmịfe. Ugbu a ịmụta otú ka a ngosi mmịfe online na offline.
Mee ka a ngosi mmịfe Movie Ka izipu site Email
Wondershare Flash Gallery Factory bụ ihe dị mfe ngosi mmịfe Ndinam ngwá ọrụ na kensinammuo ọrụ interface na mgbanwe mmepụta formats (SWF ma ọ bụ exe) na-eme ka o kwe omume ike obere ezu ngosi mmịfe ka email. Na ngwá ọrụ a, ị pụrụ ime ihe ngosi mmịfe na dị nnọọ ole na ole clicks: Bubata photos, họrọ a template na ike, na ọ bụ njikere Email dị ka ihe na-ekekọta. Ị na-atụ aro ka mpikota onu faịlụ na gị faịlụ Compressor dị ka WinZip ma ọ bụ WinRAR iji nweta a nta size nke ngosi mmịfe faịlụ. Tupu email gị ngosi mmịfe, jide n'aka na file size adịghị karịrị karịa mgbakwunye ịgba nke ọrụ email nke gị na na nnata. Ka ihe atụ, Gmail naanị-enye gị ohere iji zipu mgbakwunye dịghị ibu karịa 25 Mb na size. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi mmịfe atụ ị pụrụ Email dị ka ihe na-ekekọta.
Ekiri ihe ngosi mmịfe ndebiri >>
Bulite foto na Mee ngosi mmịfe Online
Slide bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu online ngosi mmịfe Ndinam na nkekọrịta website maka free. Mgbe a ngosi mmịfe na-kere, ị ga-a hyperlink na ya. Ya mere, ị pụrụ ịgụnye a njikọ gị email mere na gị nnata nwere ike na-ekiri ndị ngosi mmịfe site na ngosi mmịfe njikọ. Slide-enyekwara gị ngwa ngwa ịkọrọ slideshows na ndị enyi na-akparịta ụka n'Ịntanet dị ka Facebook. N'ihi ya, ị ka mkpa izipu foto dị ka ngosi mmịfe? Ma ọ bụ nanị ịkọrọ Foto ndị dị na Facebook? Ọ dịzịrị gị.
Abụọ ụzọ mee ka a Flash Quiz